RIP: Dhammaan macluumaadkaaga waxaa iska leh Matt | Martech Zone
Khamiis, Juun 17, 2010 Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Douglas Karr
Dunida teknolojiyaddu shaqsi khaas ah ayey shalay wayday, saaxiib Matthew S. Theobald. Matt wuxuu ahaa qof cajiib ah oo xariif ah, soosaarista iyo qaabeynta qaab lagu tusayo xogta adduunka iyadoo loo marayo internetka. Waxaan ka qoray Dhex-dhexaad ah ka dib markii uu la kulmay Matt ka dib dhacdo yar oo Indiana ah sanadkii hore.
Matt aragti buu lahaa oo si hagar la’aan ah ayuu u eryaday. Markii iigu dambaysay ee aan arko, wuxuu si cabsi leh qiiq uga baxayay wareega. Waan gartay oo waxaan kudhaawacnay kahadalkiisa aragtidiisa, qoyskiisa, Indianapolis waxaanan wadaagnay sheekooyin waali ah. Aad baan u qosolnay. Dhowr saacadood ka dib, waxaan u kaxeeyey gurigiisa waana inaan u sharraxaa carruurteyda sababta aan 4 saac uga soo daahay. Matt wuxuu ahaa ninka noocaas ah - wuu ku soo jiiday adiguna waad caawin kari weyday laakiin waxaad dareemeysaa inaad saaxiib hore ku lahayd miiskaaga.
Waxaan seegi doonaa maqalka codka qiiqa ee Matt, qufaca oo ku qoslaya dhacdadeena soo socota ee Yaryar ee Indiana. Waan ogahay inuu dhibtooday mararka qaar, wuxuu kaligiis kujiray maskaxdiisa mana uusan helin taageero hoose oo ka caawisa riixitaanka aragtidiisa. Waxaan kaloo ogahay in aragtidiisa doono run noqo, in kastoo, oo waxaan u sheegay mar kasta oo aannu hadlayno. Ma noqon karto Lambarka Deegaanka Raadinta Internetka ee mira dhala, laakiin nidaam u eg oo lagu abaabulo xogta internetka oo dhan ayaa run noqon doonta maalin maalmaha ka mid ah.
Matt wuxuu igu reebay farriimo dhowr ah oo ku saabsan Facebook si aan isugu imaado oo aan ugu baxo qadada isaga. Aad ayaan u mashquulsanaa, in kastoo, waligayna kuma guuleysan inaan wada kulanno. Isniinta waxaan samaysan doonaa wakhti aan ku sagootiyo saaxiibkay.
Aaska Matt waa Isniinta 6/21, 12PM, Crown Hill Qabuuraha Waqooyiga Galitaankiisa. (Goobta xafladda qabriga 223)
Tags: dhexgalkamatt theobald
Matt iyo waxaan ballan la yeelanay inaan ku wada kulanno kafeega Khamiista. Wuu ku faraxsanaa buuggayga cusub, waxaanan u geeyay shakhsi ahaan nuqul.
Waxaan u maleeyay inay tahay wax lala yaabo inuusan imaanin, anigoo tixgelinaya xamaasadiisa caadiga ah. Waxaan is tusay inay qasab tahay inuu wax ku xirmay waxaanan dib ugu laaban doonaa usbuuca soo socda.
Waan ka xumahay waxaan seegnay mid kale, Matt. Waxaan u imid inaan is macsalaameeyo Isniinta.